लता मंगेशकरले किन छाडेकी थिइन् किशोर कुमारसँग गीत रेकर्ड गराउन?
यी दुई गायकको भेट कसरी भएको थियो त? पहिलोपटक उनीहरूले कहिले देखे एकअर्कालाई?
हँसिला ती युवकलाई देखेर खेमचन्द आफैं मुर्छा पर्ने गरी हाँसे। अनि भने, ‘अरे लता तिमी यिनलाई चिन्दैनौ? यिनै त हुन् अशोक कुमारका भाइ जोसँग तिमी आज गीत गाउँदैछौ।’
लता र किशोरले गाएका सुपरहिट गीतमा ‘तेरे बिना जीन्दगी से’, ‘गाता रहे मेरा दिल’, ‘भिगी भिगी रातोंमे’, ‘देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए’, ‘तेरे मेरे मिलनकी ये रैना’, ‘आपकी आँखोमे कुछ मेहेके हुए से ख्वाब है’, ‘कोरा कागज था ये मेरा’, ‘पन्नाकी तमन्ना है की हिरा मुझे मिलजाए’, ‘हम दोनो दो प्रेमी दुनियाँ छोड चले’ लगायत हुन्।
यी दुई गायकको जोडीले जस्ता गीत गाए, सायदै बलिउडमा इतिहासमा यति हिट भएका थिए। उनीहरू फिल्मका हिरो-हिरोइन भन्दा बढी चर्चित थिए। उनीहरूको गीतले नै फिल्म चल्थ्यो। फिल्म नचले उनीहरूको गीत चल्थ्यो।
उनले भनेका थिए, ‘लताजीले एकपटक मलाई किशोरजीका बारेमा बताउनुभएको थियो। करिअरको एउटा समय लताजी र आशाजी (लताकी बहिनी तथा गायक आशा मंगेशकर) ले किशोरदासँग गीत रेकर्ड छाडिदिनुभएको थियो। मैले यसबारे लताजीलाई सोधेको थिएँ।’
एकअर्काका छेउमा उभिएर होस्, वा नउभिएर, बलिउड संगीतमा लता मंगेशकर र किशोर कुमारको जोडीले सधैं भनिरहनेछ- गाता रहे मेरा दिल…।सेतोपाटी